माओवादीबाट उम्मेदवार बनेपछि धुर्मुस–सुन्तलीलाई सीताको फोन, 'मैले टिकट लिए' - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
माओवादीबाट उम्मेदवार बनेपछि धुर्मुस–सुन्तलीलाई सीताको फोन, ‘मैले टिकट लिए’
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाबाट सिताराम कट्टेल धुमुर्सकी सासु तथा कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीकी आमा सीता घिमिरेलाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ । २०६२-०६३ सालबाट माओवादीमा सक्रिय हुँदै आएकी उप्रमुखका उम्मेदवार घिमिरले हिजो उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि जापानमा रहेका ज्वाइँ छोरी धुर्मुस–सुन्तलीलाई टिकट पाएको जानकारी गराईसकेको छिन् । धुर्मुस–सुन्तली हाल सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन जापानमा छन् ।
माओवादीले नै यो देशको विकास गर्ने निष्कर्ष सहित माओवादी बनेकी सीता घिमिरेका श्रीमान भने एमालेका कार्यकर्ता हुन् । अहिलेसम्म उनका श्रीमानले एमाले परित्याग गरेका छैनन् । तर सीताले नै उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिएपछि भने जिताउन श्रीमान पनि चुनावी अभियानमा लागेका छन् । गोदावरी नगरपालिकाबाट उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका सीता घिमिरेसँग तपाईको उम्मेदवार किन ? भन्ने विषयमा नेपाली हेडलाइन्सको लागि प्रयास पराजुलीले गरेको कुराकानीः–
कहिलेबाट माओवादीको राजनीतिक सुरु गर्नुभयो ?
माओवादीप्रति सुरुदेखि नै म झुकाब राख्थे । २०६२-०६३ सालबाट सक्रिय रुपमा माओवादीको राजनीतिक सुरु गरेको हुँ । माओवादीले लिएको नीति राम्रो लाग्छ । दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीलाई सहयोग गरेको हो ।
उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिनु भएको छ कस्तो लागेको छ ?
म भन्दा सिनियर साथीहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । तर मलाई पार्टीले विश्वास गरेर टिकट दिएको छ । म पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले जित्छु पनि ।
यो भन्दा अगाडि निर्वाचनमा उठनु भएको थियो कि थिएन ?
छैन । पहिलो पटक नै नगरपालिकाको उप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको हो । राजनीतिले नै सबै नीति बनाउने भएकाले नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नु पर्छ भनेर नै मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
तपाईले जित्ने आधार के हुन ?
पहिलो त पार्टी हो त्यसपछि म हुँ । माओवादीको नेतृत्वमा धेरै राम्रो काम भएका छन् । बर्षौदेखि अध्याँरो रहेको नेपाललाई माओवादीले नै उज्यालो बनाउन सफल भएको छ । सिंहदरवारमा रहेको केन्द्रीकृत अधिकारलाई अहिले ७ सय ४४ स्थानीय तह मार्फत गाउँगाउँमा सिंहदरवारले पुर्याएको छ । अहिले अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह बनेको छ । यसलाई संस्थागत गर्नको लागि माओवादीलाई जिताउनु पर्छ । मैले रानजीतिमा लागेर गोदावरी नगरपालिकालाई थप विकास गर्ने योजना र लक्ष्य अगाडि सारेको छु ।
तपाईको श्रीमान त एमाले होइन ?
हो, अहिलेसम्म एमाले परित्याग गर्नुभएको छैन् । अब मलाई नै सहयोग गर्नुहुन्छ । श्रीमानलाई श्रीमतीको साथ । श्रीमतीलाई श्रीमानको साथ ।
धुमुर्स सुन्तलीसँग कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
धुर्मुस सुन्तली मेरो ज्वाइँ र छोरी मात्र होइन । राष्ट्रको गहना पनि हुन् । देशको कलाकारले पार्टीको पक्षमा लागेर प्रचार गर्न मिल्दैन । मैले जापानमा रहेका छोरी र ज्वाइँलाई टिकट पाए भनेर खबर पुर्याइसकेको छु । पारिवारिक रुपमा धुर्मुस सुन्तलीले गर्ने सहयोग हुन सक्छ । तर चुनावमा प्रचारमा नै हिडनु पर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिन । आमाले जित्नु पर्छ भन्ने चाहना त छोरी ज्वाइँको भइ नै हाल्छ ।
चुनावको खर्च कसरी जुटाउदै हुनुहुन्छ ?
चुनावको लागि चाहिने सामान्य खर्च जुटाउने तयारीमा छौं । धेरै खर्च गर्न सकिन्न । धेरै खर्च गरेर भन्दा पनि जनताको मन जितेर मत ल्याउने हो । लामो समयदेखि आफने गाउँगाउँको विकास निर्माणमा भूमिका खेल्दै पनि आएको छु ।
Previousउत्तर कोरियाको मिसाइल ‘रुस तर्फ बढेपछि विस्फोट’
Next‘बाहुबली–२’ले तोड्न सकेन शाहरुख खानको फिल्मको एउटा रेकर्ड !